किन भनिदैछ यी चिनियाँ छात्रालाई देशद्रोही ? - Ratopati
किन भनिदैछ यी चिनियाँ छात्रालाई देशद्रोही ?
बेइजिङ, जेठ १० – एक चिनियाँ छात्राले अमेरिकामा आफ्नो दिक्षान्त समारोहमा दिएको उग्र प्रतिक्रियाका लागि माफी माग्न परेको छ ।
मेरील्याण्ड विश्वविद्यालयमा भाषण दिँदै याङ सुपिङले अमेरिकामा ‘लोकतन्त्रको ताजा हावा’ को तारिफ गरेकी थिइन् । सँगै उनले चीनमा बढिरहेको वायु प्रदुषण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा पाबन्दीको तुलना गरेकी थिइन् ।
यसबाट रुष्ट बनेको चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले उनलाई जन्मभूमिलाई हेपेको आरोप लगाउँदै अबदेखि अमेरिकामा नै बस्न भन्दै तीव्र आलोचना गरेका थिए ।
यद्यपि, विश्वविद्यालयले भने अलग विचार पनि सुन्नुपर्ने भन्दै छात्राको बचाउ गरेको छ ।
मिठो र ताजा हावा
याङलाई विश्वविद्यालयले नै बोल्नका लागि छनौट गरेको थियो । उनले भाषणको दौरान चीनमा प्रदुषणका कारण अनुहारमा मास्क लगाउन परिरहेको बेला अमेरिकाको मिठो र ताजा हावाको तारिफ गरिन् ।
युट्युवमा पोष्ट गरिएको भाषणमा उनी भन्छिन्, ‘जब विमानस्थलबाट बाहिर आउनेबित्तकै मैले श्वाल लिए, मैले स्वतन्त्र महसुस गरेँ ।’
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘चाँडै म अर्को किसिमको हावासँग मेरो सामना हुनेछ । जसको लागि म सँधै आभारी रहनेछु, बोल्नको लागि स्वतन्त्रताको ताजा हावा र लोकतन्त्रलाई हल्का रुपमा लिन सकिन्न । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रको ताजा हावाको लागि लड्न जुरुरी छ ।’
यो भाषण चीनको सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ । यो भिडियोलाई ५ करोडपटक भन्दा बढी हेरिएको छ ।
चिनियाँ सहपाठीको आरोप
चीनका अधिकांश सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले यसबाट क्रुद्ध बनेका छन् । चाइना मर्निङ पोष्ट पत्रिकाका अनुसार यसरी रुष्ट बन्नेमा मेरील्याण्ड विश्वविद्यालयका उनका सहपाठी पनि छन् । उनीहरुले याङलाई झुठो र धुर्त भएको आरोप लगाएका छन् ।
याङ दक्षिण–पश्चिम चीनको कुनमिङ शहरको वासिन्दा हुन् । कुनमिङ प्रशासनले उनले दाबी गरेजस्तो कुनमिङको हावा प्रदुषित नभएको बताएको छ ।
चीनको पिपल्स डेलीले याङमाथि पक्षपातपूर्ण भाषण दिएको आरोप लगाएको छ ।
चौतर्फी आलोचनापछि याङले माइक्रोब्लग्ङि प्लाटफर्म विबोमा बयान जारी गरेकी छिन् । उनले आफ्नो भाषणमा आएको प्रतिक्रियाबाट हैरान र विचलित भएको बताउँदै आफूलाई मातृभूमिप्रति अथाह माया भएको स्पष्टिकरण दिएकी छिन् ।
उनले माफी माग्दै लेखेकी छिन्, ‘म माफी माग्दछु र आशा गर्छु सबैले मलाई माफी गर्नुहुन्छ । मैले सबक पाएका छु ।’
यता मेरील्याण्ड विश्वविद्यालयले याङको बचाउ गर्दै लेखेको छ, ‘आफूसँग अहसमत व्यक्तिहरुको कुरा सुन्न र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वविद्यालयको मान्यता हो ।’
केही बिबो प्रयोगकर्ताहरुले यसमा सहमति जनाउँदै लेखेका छन्, ‘चीनका जनता अमेरिका पुगेर पनि बोल्नका लागि स्वतन्त्र नहुने रहेछन् ।’